Showing १३१-१४० of ९५३ items.
कुन खानामा कति हुन्छ क्यालोरी ?
शरीरलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न खाद्य तŒवहरूमा भिन्नभिन्न क्यालोरी पाइन्छ । शरीरलाई दिनमा कति क्यालोरी चाहिन्छ, त्यो जान्नुअघि तपाईं महिला हो कि पुरुष, उमेर, कार्यक्षेत्र, तौल, उचाइ जान्नु जरुरी हुन्छ । सामान्यतयाः एउटा स्वस्थ मानिसलाई २४ घण्टामा २,००० देखि ३,००० सम्म क्यालोरी जरुरी पर्छ । यदि तपाईं कडा परिश्रम गर्नुहुन्छ भने ज्यादा क्यालोरी जरुरत पर्छ । जस्तैः खेलाडी, आर्मी, पुलिस, मजदुर वर्ग र बढ्दो उमेरका बालबालिकालाई पनि अरूको तुलनामा बढी नै क्यालोरी जरुरी हुन्छ ।तर, अफिसमा बसेर काम गर्ने कडा शारीरिक परिश्रम गर्नुपर्ने छैन भने कम क्यालोरी भए पुग्छ । उमेर ५० नाघेको छ भने पनि क्यालोरी ज्
२९२ पटक पढिएको
आत्महत्या समस्याको समाधान होइन, शुरुवात हो
रामचन्द्र वाग्ले मानिस आफैले आफ्नो देहत्याग गर्नुलाई आत्महत्या भनेर बुझिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन २०१९ का अनुसार विश्वमा बर्सेनि करिब आठ लाख मानिसहरूले आत्महत्या गर्छन् । अहिले विश्वमा मानिसहरू मर्ने अठारौं मुख्य कारण आत्महत्या हो । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब सात हजार मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने तथ्य विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले देखाएको छ । नेपालमा हरेक एक लाख व्यक्तिमध्ये करिब नौ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्रायः १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीहरू मर्नुको दोस्रो कारण आत्महत्या नै रहेको छ । आत्महत्या गर्ने उमेर समूहमा १५ देखि ३५ वर्षसम्मका मानिसहरू सबैभन्दा
६३५ पटक पढिएको
सुशासन र नेकपाको सरकार
ओम आचार्य नेकपा एमालेमा हाल सिर्जित घटनाक्रमले जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आफ्नै पार्टीभित्रबाट राजीनामा मागेर पार्टीभित्रको विवाद र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दैछ, एमालेभित्रको यो विवाद अब अघोर रूपमा प्रकट हुनेछ । दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डको राजनैतिक पृष्ठभूमि समान जस्तै छ र मुलुकको सर्वोच्च पद प्राप्त गरिसकेका यी शीर्ष नेताहरूमा यस्तो प्रकारको विवाद र द्वन्द्वको सिलसिला चलिरहनुले निश्चय पनि पार्टीको लागि अहित गर्नुका साथै नेताहरूको व्यक्तिगत जीवनमा पनि आँच पु¥याउँछ । त्यसले देशलाई पनि नेक्सानीमा पु¥याउनेछ । कम्युनिष्ट पार्टीमा र पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा आफ्नै पार्
युवाका लागि कोरोनाले सिर्जना गरेको अवसर
कोभिड–१९ को कहर जारी छ । यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ र कति गहिरो हुन्छ भन्ने कुराको यकिन गर्न मुस्किल भएको छ । तीन महिना पहिले सरकार, हामी आम नागरिक कोभिडको प्रभाव र सकसका बारेमा जसरी सोचिरहेका थियौं, त्यो क्रमशः परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिला हप्ता–पन्ध्र दिनको लक डाउन सोचियो । हुँदै जाँदा यो तीन महिना बढी तन्किसक्यो । पहिला घरमै बसेर जितिन्छ भन्ने लाग्थ्यो । अहिले घरमा बसेर मात्रै अब जीवन चल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । शुरु–शुरुमा थोरै प्रभावित थिए, थियौं तर डर धेरै लाग्थ्यो । अहिले प्रभावित धेरै हुँदै गएका छौं तर डर हट्दै गएको छ । कोरोना सामान्य लाग्न थालेको छ । कोरो
५०२ पटक पढिएको
निशा ओली विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, अपाङ्गता र यौन तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकीहरूका सवालहरूलाई सम्बोधन नगर्दा अहिलेको अवस्थामा बृहत्तर यौनिकता शिक्षा विद्यालय जाने बालबालिकामा मात्रै सीमित भएको पाइएको छ । यौन शिक्षामा बहुआयामिक अवधारणाः शीर्षकमा ‘राइट हेयर राइट नाउ’ नामक संस्थाले हालै गरेको अध्ययनबाट सो कुरा सार्वजनिक भएको हो । नेपालमा बृहत् यौन शिक्षालाई संस्थागत गरी पैरवी गर्नको निम्ति गरिएको उक्त अध्ययनले अहिले पनि विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको महŒव र जानकारीबाट बञ्चित भएको देखाएको छ । उक्त अध्ययनले वर्तमान नीति र निर्देशिकाहरू पनि अपाङ्गता
प्रकाशित मितिः असार १७, २०७७
३६७ पटक पढिएको
नेकपामा अन्तरसङ्घर्ष र एमसीसी बहस !
पारस काङमाङ राई ३ जेठ २०७५ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी (केन्द्र) एकीकरण भयो । तर त्यसभित्रका गुट–उपगुटहरू एकीकरण हुन सकेनन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पार्टीको आन्तरिक जीवन र सरकार सञ्चालनको प्रश्नमा गम्भीर समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । पार्टीका स्थायी समितिका सदस्य एवम् कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री घनश्याम भूसाल भन्छन्, ‘पार्टीमा समस्या हुँदा दुई अध्यक्षले समाधान गर्नुपर्ने हो, दुई अध्यक्षबीचमा समस्या हँुदा कसले समाधान गर्छ ?’ (कान्तिपुर ः ११ असार ०७७) यसअर्थमा पार्टी र सरकार सञ्चालनको प्रश्नमा गम्भीर चुनौती आएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । प
गोमा पौडेल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिकरूपले पूर्णरूपमा तन्दुरुस्त हुनुलाई स्वास्थ्य भनिन्छ । अहिले विश्वले नै कोभिड–१९ नोवेल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सामना गरिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार जुन २६ सम्म विश्वभरि ४ लाख ८९ हजार बढी मानिसको मृत्यु, ९६ लाख ११ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित र नेपालमा ११ हजार १ सयभन्दा बढी सङ्क्रमित, २६ सय ५० जना उपचारपश्चात् घर फर्किसकेका छन् । विश्वजगत् नै घरभित्र बस्न बाध्य भएको छ । अर्थात् लकडाउनका कारण युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पीडित भइरहेका छन् । अर्काे समस्या भानेको दीर्घरोगीहरू स
कहिले हुने कृषिमा आत्मनिर्भर ?
नरेन्द्र बस्नेत कोभिड–१९ को महामारीले मानव स्वास्थ्यसहित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत सबै पेशा व्यवसाय तहस–नहस भएको छ । अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको छ । लकडाउन खुले पनि यातायात, शिक्षा र होटल, रेष्टुरेण्टलगायत पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । आयात, निर्यात तथा उत्पादन पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी रोकिएको छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कृषिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको छ र ६०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या यो क्षेत्रमा आबद्ध भएका छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७३ प्रतिशत हिस्सा गैरकृषि क्षेत्रको छ । लकडाउन खुले पनि देशभित्र शिक्षा, यतायात र होट
९०६ पटक पढिएको
मासिन्या र नमासिन्या मतवालीको विद्रोह
राज माङ्लाक नेपाल मूलतः इन्द्रेणी समाजले निर्मित मुलुक हो । यहाँको विविध रङले बनेको सामाजिक संरचनाको विश्लेषण नगर्ने हो भने कला, साहित्य, इतिहास, संस्कृति, समाजमनोविज्ञान, राजनीति, अर्थव्यवस्था अथवा जात वा जाति व्यवस्था केही पनि खुट्याउन सकिँदैन । इतिहासको अध्ययन पनि त्यस्तै हो । नेपालमा अहिलेसम्म गरिएका सबै अध्ययन शासकको आँखाबाट हेरेर गरिएका छन् । अथवा जित्नेको इतिहास लेखिएको छ, हार्नेको उल्लेख छैन । उल्लेख गरिहाले पनि खलपात्रको रुपमा चित्रण गरिएको भेटिन्छ । हार्ने जति सबै अपराधी त होइनन् । बरु जित्नेले धेरै आपराधिक कार्य गरेर विजय हासिल गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । यस्तै हार्नेहरुक
प्रकाशित मितिः असार १३, २०७७
७९८ पटक पढिएको